हुँदै नभएको “भिडन्त”को कथा : किन ताकीताकी हानिँदैछ गोली ?
काठमाण्डौका मिडियाले प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीचको भिडन्त भने पनि‚ प्रहरीले आफूहरुलाई घेरामा हालेर प्रदर्शनकारीले फायर गरेको भने पनि घाइतेहरुले बिल्कुलै फरक दाबी गरेका छन् । ती दुबै ठाउँमा कुनै भिडन्त नभएको र धर्नाकर्मीहरु खाना खाइरहेको बेला प्रहरीले अन्धाधुन्ध अश्रुग्यास र गोली प्रहार गरेको थियो । ...... सत्य परेशान हुन सक्छ तर पराजित हुनसक्दैन ! ..... हिजो साँझदेखि नै सप्तरीको भारदह र रुपनीका साथीहरुको सम्पर्कमा छु । आन्दोलनकारीहरुले बाटो छेकेर अवश्य बसेका थिए तर गाडीहरु नआउँदै, बिना कुनै पूर्वजानकारी राति साढे १० बजेतिर प्रहरीले भारदहमा अन्धाधुन्ध गोली चलाएको थियो । सैयौँ राउण्ड गोली चल्यो । दर्जनौ मेरा दौतरीहरु, गाउँघरका बाल्यकालदेखिका मित्रहरु घाइते भएका छन् । रुपनी र भारदहमा गरी दुई प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ । ...... त्यति गरेर पनि प्रहरीले राजमार्ग खुलाउन सकेन । अन्दाज गर्न सकिन्छ, जनप्रदर्शनमा सहभागीको । तैपनि प्रहरीले भन्छ, पहिला हामीमाथि आक्रमण भयो रे । म काठमाण्डौका पत्रकार मित्रहरुलाई विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु, कृपया स्थानीयहरुसँग भेटेर, कुराकानी गरेर वास्तविक धरातलीय यथार्थलाई समाचार बनाउनुहोस् । प्रहरीको एकतर्फी बयानलाई समाचार नबनाऊ । ....
मधेसमा समाज र राज्यबीचको सम्बन्ध असमान प्रकारको छ । राज्य, प्रहरी, प्रशासनबाट क्षुब्ध मधेसी समाज काठमाण्डौका अधिकांश पत्रकारसँग पनि सन्तुष्ट छैन् । पत्रकार मित्रहरुको ध्यान जाओस् ।
....... ती दुबै ठाउँमा कुनै भिडन्त नभएको र धर्नाकर्मीहरु खाना खाइरहेको बेला प्रहरीले अन्धाधुन्ध अश्रुग्यास र गोली प्रहार गरेको थियो । रुपनीको एक पसलमा खाना खाँदै गरेका अमरेन्द्र झा (दाह्री पालेको)माथि पहिला अश्रुग्यास प्रहार गरिएको थियो । पछि उनको टाउकोमा गोली हानेको झाले दाबी गरे । भारदहमा सहिद भएका वीरेन्द्र रामका मीत मोहम्मद अकबर अलीले भने,
‘हामी एउटा पसल अगाडि उभिएर हेरिराखेका थियौँ, प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गर्न थाल्यो । मेरै अगाडि मेरा मीत वीरेन्द्र ढले । मेरो पेटमा गोली लागेको छ ।’
संस्थागत भ्रष्टाचार .....उखान तुक्के सरकार र तिनका सम्पूर्ण सम्यन्त्र संस्थागत भ्रष्टाचार गर्दै एक तर्फ मधेशी जनताको ह...
Posted by Upendra Mahato on Saturday, November 21, 2015
Posted by Bidur Adhikari on Saturday, November 21, 2015
Constituent assembly constitution federalism Madhesh madhesi madhesi kranti3Nepal saptari Terai